ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး မြန်မာပြည်မှာ အစောဆုံး ဘယ်တော့ထိုးခွင့်ရနိုင်မလဲ.... - Pyit Time Htaung
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး မြန်မာပြည်မှာ အစောဆုံး ဘယ်တော့ထိုးခွင့်ရနိုင်မလဲ….
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ဘယ်တော့ ထိုးခွင့်ရမလဲ⁉️ အဖြေက အောက်ပါအချက်အလက်တွေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
🔹 ကျနော်တို့နိုင်ငံက dose အလုံးရေဘယ်လောက်ကို ကြိုဝယ်ထားသလဲ
🔹 COVAX အစီအစဉ်ကနေ ဘယ်တော့ရမလဲ
အမေရိကန် FDA အသိအမှတ်ပြု ကာကွယ်ဆေးက နိုဝင်ဘာလကုန်/ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ EUA အရေးပေါ်သုံးခွင့်စရပါမယ်။ WHO အသိအမှတ်ပြုကာကွယ်ဆေး ဘယ်နှစ်မျိုးရမလဲမသိပါ။ WHO အနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးကို အသိအမှတ်ပြုရာမှာ
အဂတိကင်းကင်းနဲ့ စမ်းသပ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးအနည်းဆုံး ၂ လ ဒေတာကို အသေအချာစစ်ဆေးပြီးမှ အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ ကဲ …. ကာကွယ်ဆေးတွေ နိုဝင်ဘာလကုန် ကစပြီး တစ်ခုပြီး တစ်ခု အသိအမှတ်ပြု ခံရပြီဆိုပါစို့။
အမေရိကန် CDC ရဲ့စီမံပုံက အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းရကြမယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ ရောဂါအခြေအနေဆိုးနိုင်သူတွေ၊ အသက် ၆၅ နှင့်အထက်တွေ၊ မရှိမဖြစ်လုပ်သားတွေ၊ အသက် ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးတွေက အခုမှစ စမ်းသပ်နေတာမို့ ၄ လလောက်နောက်ကျပြီး ရနိုင်ပါတယ်။
FDA က EUA အတည်ပြုလိုက်တာနဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း CDC က စဖြန့်ဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။ ယူကေနိုင်ငံမှာတော့ ရောဂါအခြေအနေဆိုးနိုင်သူတွေက ခရစ်စမတ်အမီရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ – အဖိုးအဖွားတွေ၊ ကင်ဆာရောဂါရှိသူတွေ စသည့်သူများပေါ့။
အမေရိကန်မှာ ထရမ့်က ဧပြီလမတိုင်ခင် အားလုံးထိုးပြီးဖြစ်စေချင်တယ်။ CDC ရဲ့အကြီးအကဲက လက်မခံဘူး။ ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာကိုး။ အမေရိကန် CDC က ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ သန်း ၇၀၀ အထိ ဧပြီလမှာရဖို့ မှာထားတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို နှစ်လုံးလိုမှာမို့ အမေရိကန်လူဦးရေ သန်း ၃၅၀ ကျော်အတွက် အဲ့လိုမှာယူထားတာဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီတော့ Pfizer နဲ့ Moderna ကို FDA က EUA ပေးလိုက်တာနဲ့ အမေရိကန်က အရင်အပြောင်ရှင်းသွားနိုင်တယ်။ အမေရိကန်မှာ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၃၅ သန်းကနေ ၄၅ သန်းအထိ Pfizer နဲ့ Moderna ကနေရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်။
ယူကေနိုင်ငံကလည်း Oxford/AstraZeneca ကနေ အလုံးရေ သန်း ၁၀၀ မှာထားပါတယ်။ ယူကေနိုင်ငံက လူဦးရေ ၆၆ သန်းကျော်ရှိတဲ့အတွက် အလုံးရေ သန်း ၁၀၀ လောက်ကိုမှာယူထားတာပါ။
အဲ့ဒီတော့ ပထမပိုင်း ထွက်ထွက်ခြင်း အနည်းငယ်ပဲ ကျနော်တို့ရမယ်။
★ အဲ့ဒီအတွက် ကျနော်တို့လက်ထဲကာကွယ်ဆေးရောက်လာရင် မတ်လကအစောဆုံးပဲလို့မြင်တယ်။
★ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေရဲ့ ၆၅% ထိုးပြီးဖို့က အစောဆုံး ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လပဲ။ ၂၀၂၁ နှစ်ကုန်အထိကြာသွားနိုင်တယ်။
စစခြင်းနှေးပေမယ့် J&J တို့၊ Novavax တို့၊ Sanofi တို့၊ GSK တို့ကနေ ကာကွယ်ဆေးတွေထပ်ပြီး အသိအမှတ်ပြုရလာနိုင်တာတွေကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ မြန်လာနိုင်ပါတယ်။
★ အဓိကက ဘယ်ကာကွယ်ဆေးမဆို တရုတ်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ဖြစ် WHO က အမေရိကန် FDA စစ်ဆေးသလိုစစ်ဆေးပြီးမှ အဂတိကင်းကင်းနဲ့ အသိအမှတ်ပြုဖို့ပါပဲ။
အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဆေးရရ အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ဝယ်ရင်ထိုးရဲတယ်။ Mask တွေအပြင်ထွက်ရင် လုံးဝ မလိုတော့မှာက ၂၀၂၂ မှာမှဖြစ်နိုင်မယ်။
Richard Myo Thant (လေးစားစွာ ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်)
ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ဘယ္ေတာ့ ထိုးခြင့္ရမလဲ⁉️ အေျဖက ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။
🔹 က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက dose အလုံးေရဘယ္ေလာက္ကို ႀကိဳဝယ္ထားသလဲ
🔹 COVAX အစီအစဥ္ကေန ဘယ္ေတာ့ရမလဲ
အေမရိကန္ FDA အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေဆးက ႏိုဝင္ဘာလကုန္/ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ EUA အေရးေပၚသုံးခြင့္စရပါမယ္။ WHO အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေဆး ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရမလဲမသိပါ။ WHO အေနနဲ႔ကာကြယ္ေဆးကို အသိအမွတ္ျပဳရာမွာ
အဂတိကင္းကင္းနဲ႔ စမ္းသပ္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးအနည္းဆုံး ၂ လ ေဒတာကို အေသအခ်ာစစ္ေဆးၿပီးမွ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ ကဲ …. ကာကြယ္ေဆးေတြ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ ကစၿပီး တစ္ခုၿပီး တစ္ခု အသိအမွတ္ျပဳ ခံရၿပီဆိုပါစို႔။
အေမရိကန္ CDC ရဲ႕စီမံပုံက ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းရၾကမယ္။
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ၊ ေရာဂါအေျခအေနဆိုးႏိုင္သူေတြ၊ အသက္ ၆၅ ႏွင့္အထက္ေတြ၊ မရွိမျဖစ္လုပ္သားေတြ၊ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြက အခုမွစ စမ္းသပ္ေနတာမို႔ ၄ လေလာက္ေနာက္က်ၿပီး ရႏိုင္ပါတယ္။
FDA က EUA အတည္ျပဳလိုက္တာနဲ႔ ၂၄ နာရီအတြင္း CDC က စျဖန႔္ဖို႔စီစဥ္ထားတာပါ။ ယူေကႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေရာဂါအေျခအေနဆိုးႏိုင္သူေတြက ခရစ္စမတ္အမီရႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဥပမာ – အဖိုးအဖြားေတြ၊ ကင္ဆာေရာဂါရွိသူေတြ စသည့္သူမ်ားေပါ့။
အေမရိကန္မွာ ထရမ့္က ဧၿပီလမတိုင္ခင္ အားလုံးထိုးၿပီးျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ CDC ရဲ႕အႀကီးအကဲက လက္မခံဘူး။ ျဖစ္မွမျဖစ္ႏိုင္တာကိုး။ အေမရိကန္ CDC က ကာကြယ္ေဆး အလုံးေရ သန္း ၇၀၀ အထိ ဧၿပီလမွာရဖို႔ မွာထားတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကို ႏွစ္လုံးလိုမွာမို႔ အေမရိကန္လူဦးေရ သန္း ၃၅၀ ေက်ာ္အတြက္ အဲ့လိုမွာယူထားတာျဖစ္တယ္။
အဲ့ဒီေတာ့ Pfizer နဲ႔ Moderna ကို FDA က EUA ေပးလိုက္တာနဲ႔ အေမရိကန္က အရင္အေျပာင္ရွင္းသြားႏိုင္တယ္။ အေမရိကန္မွာ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ကာကြယ္ေဆး အလုံးေရ ၃၅ သန္းကေန ၄၅ သန္းအထိ Pfizer နဲ႔ Moderna ကေနရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။
ယူေကႏိုင္ငံကလည္း Oxford/AstraZeneca ကေန အလုံးေရ သန္း ၁၀၀ မွာထားပါတယ္။ ယူေကႏိုင္ငံက လူဦးေရ ၆၆ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့အတြက္ အလုံးေရ သန္း ၁၀၀ ေလာက္ကိုမွာယူထားတာပါ။
အဲ့ဒီေတာ့ ပထမပိုင္း ထြက္ထြက္ျခင္း အနည္းငယ္ပဲ က်ေနာ္တို႔ရမယ္။
★ အဲ့ဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႔လက္ထဲကာကြယ္ေဆးေရာက္လာရင္ မတ္လကအေစာဆုံးပဲလို႔ျမင္တယ္။
★ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရရဲ႕ ၆၅% ထိုးၿပီးဖို႔က အေစာဆုံး ၂၀၂၁ ဇူလိုင္လပဲ။ ၂၀၂၁ ႏွစ္ကုန္အထိၾကာသြားႏိုင္တယ္။
စစျခင္းေႏွးေပမယ့္ J&J တို႔၊ Novavax တို႔၊ Sanofi တို႔၊ GSK တို႔ကေန ကာကြယ္ေဆးေတြထပ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳရလာႏိုင္တာေတြေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္လာႏိုင္ပါတယ္။
★ အဓိကက ဘယ္ကာကြယ္ေဆးမဆို တ႐ုတ္ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ျဖစ္ WHO က အေမရိကန္ FDA စစ္ေဆးသလိုစစ္ေဆးၿပီးမွ အဂတိကင္းကင္းနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ပါပဲ။
အဲ့ဒါဆိုရင္ဘယ္ေဆးရရ အစိုးရအစီအစဥ္နဲ႔ဝယ္ရင္ထိုးရဲတယ္။ Mask ေတြအျပင္ထြက္ရင္ လုံးဝ မလိုေတာ့မွာက ၂၀၂၂ မွာမွျဖစ္ႏိုင္မယ္။
Richard Myo Thant (ေလးစားစြာ ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္)
Previous post နှင်းဆီပါတီ ကို နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကြေငြာ
Next post မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတ ကင်ဂျုံအန် ပြည်သူကိုေ တာင်းပန်ပြီး မျက်ရည်ကျခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်း နဲ့ နိုင်ငံရေးမျက်လှည့်များ